UK: Ciyaartoy Caan ah Oo Xanuunka HIV/AIDS uga baxay ciyaaraha
HomeWararka MaantaUK: Ciyaartoy Caan ah Oo Xanuunka HIV/AIDS uga baxay ciyaaraha
05/04/2015 Abdiwahab Ahmed
Xanuunka halista ah ee HIV AIDS saamayn badan ayuu ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada, mana laha cid gaar u ah oo halis ugu jirta ama uu ku dhacaa, hase yeeshee dhamaan binu-aadamka ayaa halis ugu jira oo uu ku dhici karaa. Siyaabaha lagu kala qaado waa la garanayaa, waxana ugu horreysa galmo lala sameeyo qof xanuunka qaba, taas oo lagu tilmaamo in 90% ay tahay sida uu xanuunkaasi ku fido.
Marco Negri waxa uu u dhashay Scotland, waxaanu u ciyaari jiray kooxda Rangers, hase yeeshee mar kaliya ayuun buu shaaciyey in uu ciyaaraha ka fadhiistay isaga oo aan shaacinin sababta ku kelliftay in uu kubadda joojiyo.
Hadda waxa la joogaa 10 sannadood wakhtigii uu kubadda ka fadhiistay, imika ayaanu shaaciyey sababtii uu u fadhiistay oo ahayd sida uu sheegay in uu ka shakiyey in uu helay Cudur-sidaha HIV oo marka dambe noqda AIDS.
Inta badan waxa uu ka ciyaaray horyaalka wadanka Italy, waxana uu ahaa weeraryahan ay u sahlan tahay in uu kubbadda shabaqa ku hubsado. Sannadkii 1997 ayay kooxda Perugia ee ka dhisan wadanka Italya ay £3.5million kaga iibsatay Negri kooxda yar eee Ibrox, waxaana uu u ciyaaray 23 kulan oo uu u dhaliyey 10 gool oo horyaalka isla-xili-ciyaareedkaas.
Kaddib dhaawacyo hadheeyey mustaqbalkiisa, waxa uu November 13, 2000 loo qaaday Glasgow oo lagu sameeyey qalliin iyo daawooyin, waxaana markii uu ka baxay dhakhtarka uu sannadkii cusbaa tababarka la sameeyey kooxda kaydka ee Glasgow oo uu ku biiray, iyadoo laga daweeyey dhaawac jilibka lugta midig ka gaadhay.
Baadhitaanno dheeraad ah oo la sameeyey Cisbitaalka Ross Hall Hospital markii uu sii batay xanuunkii jilibka ka hayey, waxa soo baxday walaac sheegayay in jidhkiisa lagu arkay calaamado muujinaya in uu ku soo socdo xanuunka HIV/AIDS.
Kadib waxa uu u duulay wadanka Italy, halkaas oo uu ku nool yahay, iyadoo ay hadda da’diisu tahay 44 jir.
Waxa halkaas ku booqday saxafiyiin ka socda wargeyska Daily Record, waxaana waraysi ay la yeesheen uu kaga hadlay waxyaabo badan oo la xidhiidha sababtii uu ciyaaraha uga fadhiistay in ay ahayd isagoo ka cabsi qabay in uu ku dhaco xanuunka HIV/AIDS, isla markaana dhaawaciisu uu sabab u noqon doono xanuunkaas halista ah.
“Si degdeg ah ayaa dhakhtarka la ii dhigay. Anigu maan tixgelinaynin suurtogalnimada in uu igu dhacay HIV, laakiin waxa iga yaabiyey ee niyad jabka igu riday wuxuu ahaa markii warbixinta baadhitaanka la isoo hor dhigay, taas oo ay adag tahay in aad iska indho-tirto oo aad iska dhaafto.” Sidaas ayuu Negri yidhi.
“Maan dareemaynin in aan waxyaabahan anigu kaligay xallin karayo, waxa aan u baahday qoyskayga oo iyagoo ila socda baadhitaano dheeraad ah la igu sameeyey Talyaaniga si aan u fahanno xaqiiqadu waxay tahay, khataraha iyo waliba sida aan uga soo kaban karayo dhaawaca.
“Si ku-meelgaadh ah ayaan u degay Italy, waxaanan ka codsaday sharci-yaqaankayga in uu Rangers ka dalbado in la buburiyo heshiiskii naga dhexeeyey.” Ayuu raaciyey Negri.
Waxa uu xusay in nasiib wanaag dhakhtar fiican oo uu ka helay Bologna oo baadhitaanno dheeraad ah sameeyey uu arrinta xalliyey, isla markaana ay noloshiisii mar kale hagaagtay, iyadoo xanuunkii HIV ee la tuhunsanaa meesha uu ka baxay.
Cahill Oo Xili Dambe Guul Ku Hogaamiyey Chelsea
18/03/2017 Abdiwahab Ahmed
Manchester United Oo Qarka U Saaran Marquinhos Iyo Wakiilkiisa Oo Ka Hadlay
Harry Kane Oo Saddexlaydii Saddexaad Ee 2017 – ka Uu Dhaliyo Tottenham Ugu Horseeday kaalinta 2 aad
26/02/2017 Abdiwahab Ahmed